Ngaba kukho naziphi na izicwangciso ze-Twitter SEO?
Ngo-2017, i-SEO iguqukele kwisiteshi esikhulu sokuthengisa. Namhlanje, ukulungiswa kwenjini yokukhangela akukona nje ngokufumana izixhobo ezibekwe kwiinjine zokukhangela. Ukuqonda okungcono ukuba yiyiphi i-SEO ngokuphathelele, kufuneka uqale uqonde ngeendlela ezithintela ngayo iindaba zentlalo zithintela i-SEO.
Kuye kwabonakaliswa ukuba ukubandakanya amajelo ezentlalo yingxenye ebalulekileyo yezinga lewebhu - купить наполнитель для кресла мешка. Iimpawu zentlalo zinganokwandisa i-rankings ye-SEO yangaphakathi.
Isebenza ngale ndlela ilandelayo: ubungakanani bommandla wakho kunye nokubandakanya kwayo kubonakaliso obuncedo bokuqukethwe kwakho kunye nomgangatho. Okongeziweyo, umxholo ovela kumajelo asekuhlaleni udla ngokubonakala kwimiphumo yosesho lweGoogle. Yingakho enkulu, ejoliswe kwi-Twitter elandelayo kunye nokubandakanyeka nomxholo wekhontrakthi yakho inenzuzo kakhulu kwishishini lakho.
Ngoko, namhlanje, iingcali ze-Semalt ziza kuxela malunga neengcebiso eziphambili kwi-Twitter yakho ye-SEO ukulungiswa. Basebenzise ngokusebenza ukukhula okulandelayo kunye neyeshishini lakho.
I-Twitter SEO Imfuneko Okufuneka Uyazi
1. Ukuphuhlisa i-Twitter ye-SEO Strategy
Into yokuqala omele ukuyenza yakha isicwangciso esiliqilileyo. Njengomgaqo, izicwangciso ziqala ngeenjongo eziqhelekileyo. Chaza umgomo wakho oyintloko ngokuchonga uhlobo luni lweziphumo ozilindayo ngokusebenzisa i-Twitter ngokuthengisa. Mhlawumbi, uzama ukukhuthaza ulwazi lomthengi, ukuthengisa inkonzo entsha okanye ukwandisa i-blog traffic?
Xa usuyenziwe ngokuchonga injongo yakho, isinyathelo esilandelayo kukukhetha nokuvavanya iindlela ezifanelekileyo zokufikelela ezi njongo.
2. Ukugxila kwiLizwi likaBrith
Gcina ingqondweni: nganye i-tweet enye ibonisa uphawu lwakho. Yingakho iifayile zakho zeetweet kufuneka zihlale zithembekile kwizwi lakho, limele igama lakho. Qinisekisa ukuba bayabhenela kubaphulaphuli bakho.
Enye into ebalulekileyo ukuhlela - hlela ii-tweets zakho kungekuphela kwe-typos kodwa ude u-100% uqinisekile ukuba i-tweet nganye ibonisa yonke into ofuna ukwabelana ngayo nabathengi.
3. Ukuqhubeka nokukhula koluntu
Akunakukhanyela ukuba imicimbi yobukhulu. Nangona kunjalo, xa kuziwa kwi-Twitter, ukubandakanya kukumkani. Yenza abalandeli babelane ngomxholo wakho, kodwa zama ukuphepha amaqhinga aphantsi - awanakulungele ukutyalomali.
Esikhundleni sokuqala ibhola yokugqeba kwaye ugcine uhamba ngokubandakanya kokubini: abalandeli abanamhlanje nabanakho. Qala ngokudala umxholo obalulekileyo abantu abafuna ukusebenzisana nabo kwaye babelane ngawo. Enye into ukuphendula - impendulo imibuzo yabantu kunye namazwana, phendula kwii-tweets ezithe ngqo. Ungalibali ukukhumbuza nayiphi na into ekhankanyiweyo, ungeze amanqaku akho.
4. Ukukhetha amagama angundoqo
Kubaluleke kakhulu ukwenza umxholo wakho ube lula ukuyifumana. Umele uphathe i-Twitter yakho njengawe nayiphi na injini yokusesha. Zama ukusebenzisa amagama asemgangathweni kuzo zonke i-tweet enye. Musa ukulibala malunga nama-hashtag, bio, kunye neengcaphuno-zinokukunceda ikhasi lakho le-Twitter.
Khumbula, kwiimeko ezininzi, abantu bafuna i-Twitter ngamagama angundoqo. Ngaloo ndlela, qiniseka ukuba i-akhawunti yakho ibonisa oko kuthethwa kwishishini lakho.
5. Ukulandelela i-Traffic yakho ye-Twitter
Njengoko bethetha, oko akuyiyo imilinganiselo ayikhuli. Awuzange uvule i-Twitter analytics? Ngoko ke ungcono ukuhamba oko ngokukhawuleza kunokwenzeka ukuba ufumane ngokukhawuleza kwindlela oyenzayo kwaye ulandelelwano lwakho lweveki ngeveki.
I-Google Analytics inokukuxelela nokuba uninzi lweetyelelo oluya kwi-Twitter. Olu lwazi luza kukunika ingqiqo yokuba ingakanani imoto yakho inokulandelwa kwi-Twitter.
Njengoko siyazi, i-Twitter yindawo ephakamileyo. Yakha imiyalezo eya kukumisa ngaphandle kokhuphiswano. Gcina umxholo wakho uyigugu kwaye ufunde lula. Ngaphezu kwakho konke, yenza okufanelekileyo kwaye luncedo, kuba yiyo i-Twitter SEO isebenza ngayo.